Agrotechnics nke na-eto eto odo odo: kere ma lekọta - Mkpụrụ ubi - 2019
Kedu ka esi eto currants odo n'ogige
Ọ dịwo anya 'edebanye aha' Currant n'ógbè ndị dịpụrụ adịpụ. Ụfọdụ na-eto ọtụtụ osisi, ebe ndị ọzọ na-akụ ihe ọkụkụ niile. Osisi uhie, nke oji na nke ocha mara mmadu nile. Mana enwere uzo di iche nke na-enweta nkwado.
Tụlee ihe na-achagharị odo odo, lee anya na nkọwa nke ụdị dịgasị iche ma hụ foto nke ohia a.
Esi zụta seedlings
Oge kachasị mma
Usoro nzọụkwụ Stepwise
Nlekọta siri ike - nkwa nke owuwe ihe ubi bara ụba
Ịgbara, weeding na loosening
Igwu ala n'etiti ahịrị
Ọgwụ ọjọọ na ọrịa
Nkọwa nke ụdị
Ebe obibi dị n'ebe ọdịda anyanwụ United States, n'ebe ndịda ọdịda anyanwụ nke Canada na Mexico ebe ugwu. Na Russia Federation, ọ na-eto n'ozuzu Europe, na mpaghara Eastern Eastern na Caucasus.
Ọ bụ ezigbo elu (ruo 2-2.3 m) shrub na okpueze gbara gburugburu, alaka ndị dị ogologo na mgbọrọgwụ siri ike nke nwere ike iru 1.5 m. Akwụkwọ ndị ahụ nwere atọ-lobed, ruo 5 cm n'ogologo, ma nwee agba odo odo. N'oge mgbụsị akwụkwọ, agba na-agbanwe na mmanụma, maroon, ọbara ọbara ma ọ bụ odo-lemon. Otu ihe a nwere ike ime n'August (ọ bụrụ na ohia adịghị otplodonosil). N'ile anya, ha dị ka gooseberries, ọbụnakwa dị ntakịrị karịa ihe ndị dị na mbụ maka currants, ya mere, osisi ahụ na-emehiekarị maka ngwakọ. Ka ọ dị ugbu a, ọ bụ ụdị dị iche.
Ọ dị mkpa! Ugbo ala adighi adi nma, iji jide n'aka na ihe owuwe ihe ubi ahu bu ihe ubi di nso. Ya mere na-akpali mmalite nke ọhụrụ ovaries.
Na njedebe nke May, oge okooko malitere, nke ga-adịru izu 2-3. N'oge a, na agba ọsọ ọsọ, a hụrụ obere okooko osisi ọlaedo, na-esi ísì ísì ụtọ.
Ị ga-enwe mmasị ịmụta banyere oji, red na ọcha currants.
July bụ oge ịmị mkpụrụ. Ị nwere ike ịnakọta obere tomato. "Bọọlụ" ndị a dị 4-8 mm n'ịdị iche dị na agba: ọtụtụ mgbe ọ bụ ọgaranya na-acha odo odo, ọ bụ ezie na aja aja na mkpụrụ osisi gbara ọchịchịrị abụghị ihe ọhụrụ. Ha na-atọ ụtọ, na-enwe obi ụtọ. Ụdị ọdụ anaghị abịa. Mkpụrụ osisi n'afọ nke atọ mgbe nlọchara anya, ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke arụpụta ihe na-ada n'ime afọ ise (5-7) (jiri nlezianya na-elekọta, a na-enweta ezigbo nchịkọta n'afọ 8). Dabere n'ụdị dịgasị iche iche, a na-ewepụ gram 4-8 nke ohia.
Ụdị currant dị otú a na-atụle nke ọma dị iche iche na - enweghị atụ - ọ na - eguzogide oké ọkọchị.
Tupu ịzụrụ ya kwesịrị ịcheta ihe ịrịba ama ndị na-egosi sapling dị mma. Lee ha bụ:
Ntọala nkịtị. A ohia nwere 3-5 isi mgbọrọgwụ 15-20 cm ogologo. Ọ bụrụ na ogbugbo ha agbanwewo edo edo - ọ dịghị ihe jọgburu onwe ya. Isi ihe - ọnụnọ nke mgbọrọgwụ fibrous.
Ị ma? Osisi iri asaa na iri ato na-eri ihe ndi mmadu choro kwa ubochi maka vitamin C. N'ezie, o di nma iri nkpuru nkpuru.
Mkpụrụ abụọ nke mbara igwe dị na 30-40 cm n'ogologo ga-ezu maka ohia ịmalite. Ha nwere ike na-enye na-akụ na otu oge ịse, nke a nhọrọ bụkwa ezigbo - na mgbọrọgwụ "dọpụtaara" ya.
Ọnọdụ nke osisi ahụ. A na-ewepu ahịhịa, ịkpụ, na-egwugharị na "alaka" peel. Achọrọ otu ohia.
Lezienụ anya n'ebe ire ere. Ọ bụrụ na ndị na-eto eto na-eguzo ụbọchị dum n'ọkụ, enwere ihe ize ndụ na ha ga-akpọnwụ.
Mgbe ị na-ebugharị aro nke Ome na mgbọrọgwụ nwere ike mebie emebi - a ga-eji nlezianya kpoo ya ebe dị mma. Nke mere na rhizome adịghị akpọnwụ n'okporo ụzọ ahụ dacha, ọ na-ejikarị eriri mmiri ma kpuchie ya na ngwugwu n'elu.
Maka ubi nwere ahụmahụ, ịgha mkpụrụ dị otú ahụ na saịtị ahụ agaghị esi ike. Ọ bụ ezie na ọ bụ onye mbido ọ dị mfe, ma ọ bụrụ na ị maara nuances nile nke ọrụ dị otú ahụ.
Ị nwere ike akụ osisi ma n'oge opupu ihe ubi na n'oge mgbụsị akwụkwọ. Nanị ihe bụ na a na-agbakọ oge iji wepụ "ụda" nke osisi na-adịghị ahụkebe n'ime frosts. Mmiri "oge" nke akuku ọdịda na March, ya bụ, tupu mmalite nke kpụ ọkụ n'ọnụ sap eruba. Ọ dị mkpa ka ị "jide" oge ahụ ma jide ya tupu buds ahụ amalite (n'ezie, gbanwee maka ọnọdụ ihu igwe na mpaghara).
Ọ dị mkpa! Na mgbakwunye na usoro "ohia" iji na-eto ma jiri ụkpụrụ. Ka ogwe na-ahapụ otu oge dị egwu nke dị 70-75 cm, belata ndị ọzọ niile. Ka oge na-aga, ụdị ụdị currant nwere ike itinye aka na osisi dị otú ahụ.
Ọtụtụ na-agbalị ịkụnye currants na ọdịda, na izu abụọ mbụ nke October. N'oge oyi, a ga-eme ka ala sie ike, osisi ahụ ga-esi ike, mmalite nke okpomọkụ ga-eto ngwa ngwa.
Mụta banyere ụdị dị iche iche nke currants maka saịtị gị.
Kwesịrị ekwesị maka ihe ọ bụla mejupụtara ala - site na akọrọ acidified na mmiri alkaline. Sandy loam ma ọ bụ loam dịkwa mma. Maka mmiri mmiri, e nwere otu achọrọ: ebe dị omimi (1 mita na n'okpuru). Nkwa dị elu ga-emerụ ihe ọkụkụ ahụ.
Ebe kwesịrị ịgba ọkụ, ma ọ bụrụ na enweghi ike ịme ya - oghere ihu ọma dịkwa mma. Ubi ahụ dị larịị, mgbe mgbe n'ebe ọdịda anyanwụ ma ọ bụ n'ebe ndịda ọdịda anyanwụ nke ụlọ.
Ị nwere ike itinye ohia dị nso nsu, na-apụ site na ngere gbasara 1 mita.
Nkwadebe nke ala dịkwa mkpa. A na-ekpuchi ala ahụ, ewepụsị ata na shọvel na-egwupụta ruo omimi nke bayoneti. Ruo izu isii, a na-akwa ala. Na 1 square. m na-enye ọbụna 6-8 n'arọ nke compost na 20-30 g nke potash.
Ị ma? Ị nwere ike ịhụ currants na akụkụ ọ bụla nke ụwa. Nanị ihe ndị ọzọ bụ Australia na Antarctica.
Ihe niile dị njikere maka ọdịda, gaa n'ihu:
egwu ala oghere 50 x 60 cm;
A na-etinye nri na-agbagharị n'olulu, na-agbakwunye otu iko ash na superphosphate na iko;
mgbe ahụ, mmiri jupụtara na ya;
Were mkpụrụ osisi ahụ ma jiri nwayọọ tinye n'ime oghere ahụ. N'otu oge ahụ, a na-agbanye olu olu nke 6-7 cm. N'ebe a, e nwere otu caveat - a kụrụ osisi ahụ n'otu akụkụ (nke a bụ otú mgbọrọgwụ ọhụrụ ga-esi dị mma ịmalite). Ọ bụrụ na itinye ozugbo sapling, ọ ga-abụ na ọ ga-apụta na ọ ga-apụta;
Ọ na-anọgide na-fesaa ya na ala, jiri nwayọọ nwayọọ na-agbapụta ala na mkpịsị ụkwụ n'akụkụ ogwe. A na-arụkwa otu nkwụsị nzọụkwụ: dịka ọmụmaatụ, ọhia 3-4 ga-enwe 3-4 bọket mmiri, ebe ụmụaka ga-achọ 5-7.
Ejiri akara nke akuku ihe di ka 2,5 x 1.2 m. Rịba ama na akụrụngwa kachasị mma na-atụle 2-3 afọ bushes na 3-4 ike ike na ogologo urinary mgbọrọgwụ (20-25 cm ọ bụla). N'ebe ha dị elu, 5-6 ndị fọdụrụnụ na-ahapụ, ndị secateurs na-ewepụ ndị fọdụrụ.
Anyị maararịrịrịrị ọdịiche dị n'etiti currant ọlaedo, otú e si akụ ya, ma ugbu a bụ oge iji tụlee otú e si elekọta ubi dị otú ahụ.
Ọ dị mkpa! Tupu akuku, enwere ike ịme rhizome ahụ ruo awa 2-3 na ngwọta na-arụ ọrụ na mmiri, wee mikpuo n'ime mmiri ruo ụbọchị ole na ole. Enwerekwa nhọrọ dị mfe karị - iji nọgide na mmiri ruo mgbe mgbọrọgwụ na-akụda lobe ọhụrụ.
A naghị achọ mmiri ọkụ mgbe niile, 3-5 ụzọ na-eru nso n'oge oge na-eto eto.
A na-agbanye mmiri n'ime okirikiri, na-anwa ịghara imetụ akwụkwọ. Ụkpụrụ maka nwa ohia bụ 10-20 lita. A ga - enwe "mkpụrụ ndụ" ka ọ dị mkpa 30-35 lita mmiri. Maka nnukwu ubi, usoro nke sprinkling kwesịrị ekwesị - nke a bụ otú e si echekwa iru mmiri dị mkpa, ọ dịghịkwa mkpa ịgagharị na bọket, ọ bụ iji dozie isi.
Tupu ịmịpụ buds (ná mmalite oge opupu ihe ubi) ma ọ bụ mgbe epupụta daa (na njedebe nke September), a na-emepụta mmiri na-edozi ahụ, nke na-eme ka osisi ahụ sie ike, ọ bụkwa iji zụlite mkpụrụ ha n'ọdịnihu.
A na-emeju anụ dị ka mkpa: ozugbo ata ahụ pụtara, a na-ewepụ ha ozugbo.
Ma ọ bụ na-achọsi ike ịtọghe mgbe ọ bụla atọ. "Ijupụta" ala, ị ga-enye ohere ikuku na mgbọrọgwụ. Tightening adịghị ya uru, ma ọ bụghị ala ụwa ga-ewere jikọrọ ọnụ ma malite ịgbawa.
Anya siri ike anaghị achọkarị fertilizing. Humus tinye n'ime osisi ga-ezu ma ọ dịkarịa ala ruo afọ 2. Malite na afọ nke atọ, na oge opupu ihe ubi, a na-eriju bushes: nnụnụ nnụnụ ma ọ bụ nri ndị e jikọtara ya na "mmiri ịnweta" dị na mgbọrọgwụ.
N'oge mgbụsị akwụkwọ, a ga-etinye lita 4-4.5 nke compost ma ọ bụ humus n'okpuru ohia. N'otu oge ahụ gbakwunye ngwakọta nke potassium sulfate na superphosphate (20 g). A na-eji uyi dochie ha, nke na-ewere ọkara otu iko.
Ọ ga-aba uru maka ị mụta maka ịkụ nri nri na mmiri.
A naghị eji ogige ma ọ bụ "chemicals" mee ihe dị ka nri.
Wunye okwute nke mulch mgbe ọ bụla ọ bụla, ya mere mmiri na-ejigide. Dị ka mkpuchi maka currants na-eji:
Ị ma? Mkpụrụ osisi na-adịghị ọcha na-enwe vitamin C ugboro anọ karịa mfri eke.
nri. A na-edozi nri na-eme ka ọ ghara imetụ alaka ahụ aka.
Mgbe a na-egwu ala mgbụsị akwụkwọ mgbụsị akwụkwọ na-eli ya n'ala. Iji "kpuchie" bushes maka oyi, ọ ka mma iji peat. Ma na ahịhịa ma ọ bụ ahịhịa nke ahịhịa nwere ike ịnweta pests nke oyi na "ụlọ" dị otú ahụ.
Ihe nkiri ahụ dịkwa mma maka oyiing, ma ọ ga-etinye ụta ndị a na-egbute ma na - edozi - ọ gaghị adị n'akụkụ ala. Ọ bụrụ na a na-eleta n'oge oyi nke ọma, ọ ka mma ịjụ ụdị ihe ahụ.
Ụdị ihe edo edo na-eme ka anya anụ ahụ mara, mana ọ ga-achọkwachaa oge ọ bụla.
Ka anyị kwuo ngwa ngwa - na afọ mbụ a naghị eme ya. Malite site na afọ nke abụọ mgbe nlọchara, a na-eme usoro a kwa afọ na mbubreyo mgbụsị akwụkwọ. Iji mee ka nsonaazụ ya pụta, ị nwere ike itinye ya ọzọ na oge opupu ihe ubi (ruo mgbe buds kwụsịrị). N'afọ nke abụọ ịhapụ 3-5 eto eto eto kachasị ike. Ka oge na-aga, ha ga-abụ ọkpụkpụ. A na-ewepụ usoro na-adịghị mma, ndị na-ehichapụ ma na-egbochi ya. N'oge ọkọchị, alaka ndị na-eto eto dị ntakịrị mkpụmkpụ site n'ịkụnye buds abụọ. Nke a dị mkpa maka ịmepụta ohia: mkpụrụ ahụ na-eto na alaka ochie na uto nke ome ọhụrụ na-accelerates.
Ọ dị mkpa! Mgbe ha wepụsịrị akwụkwọ akọrọ ma ọ bụ ọrịa ma ọ bụ ọrịa, anaghị echekwa ha n'ime olulu compost. Ọ ka mma ịkụ ya ozugbo - ọ gaghị ekwe ka ọrịa na pests bịa ọzọ.
N'afọ nke atọ ma ọ bụ nke anọ, ihe nile na-ekwughachi. Enwere nlezianya anya iji dozie alaka ndị dị n'etiti ohia. Na layering, malitere na 2-3-afọ alaka, ahapụ ihe karịrị buds anọ. A na-atụle ohia ka a kpụrụ ya.
Afọ 5-6 nke uto bụ oge nke mbụ "ntorobịa" kwachaa. A na-egbutu alaka kachasị ala karịa ka o kwere mee. Ejikọtara na nke a, akọrọ, ọrịa, ngafe, ma ọ bụ alaka ndị gbawara agbawa. Achịkọta izugbe nke okechaa kwa afọ ka achikotachara dị ka ndị a:
na Ome afọ gara aga hichaa n'elu;
na alaka 2, 3, na afọ 4, ha belata branching, na-ahapụ 2-3 buds n'ebe ahụ;
nke ndị na-eto eto na-ahapụ ihe kacha mma;
oge kacha mma maka pinching ga-abụ n'etiti afọ July;
a na-ewepụ alaka ndị na-ekpo ọkụ ozugbo, n'agbanyeghị oge ha dị.
Ọrụ dị mkpa na-egwu egwu n'oge mgbụsị akwụkwọ. Maka ala dị arọ ma dị egwu, ọ dị mkpa, ebe na ala na-edozi ala a ga-enwe nkwalite nke ọma.
Kpoo okpueze ahụ ka ọ dị n 'mita 6 cm, ka ọ ghara imebi rhizomes. N'èzí okpueze, ị nwere ike iwere omimi nke 10-15 cm.
Ị ma? Nke kachasị na mpaghara anyị bụ currant iche "Yadrenaya". A na - akpọ aha ahụ ezi ihe - mkpụrụ osisi ahụ na - eto eto ruo 7-8 g ọ bụla.
Nke a dị mfe ma dị irè na-eme ka bushes dịkwuo mma, na-eme ka ikuku na-asọba na mgbọrọgwụ ma na-echebe osisi site na pests ndị na-ejikarị elu na ala elu.
Ụdị ahụ na-eguzogide ọgwụ siri ike na ọrịa na mgbochi ọrịa, n'ihi ya, mgbochi na-abịa n'ihu.
A na - eme ọgwụgwọ tupu oge opupu ihe ubi. Ruo mgbe a na-emegharị mmiri, jiri usoro "ọkụ" ahụ. Ọ dị mfe: mmiri na-ekpo ọkụ ruo ogo 80, mgbe ahụ, a na-eme ka mmiri na-agba ya mmiri site na iji mmiri na-agba mmiri. Akara lita 10 zuru ezu maka 2 okenye ohia.
Mụtakwuo banyere ọrịa na-efe efe na pests.
Tupu buds achawapụta, a na-eji osisi 2 na-emepụta bushes nke Karbofos ma ọ bụ Nitrofen. Mgbe osisi na-aga n'uba, ị nwere ike ijikwa "Fundazole" - igbochi oge ga-aba uru. Maka oke zuru oke, a na-eji mmiri mmiri Bordeaux nke dị ala (ruo 2%) mee ihe.
Mgbe oge mgbụsị akwụkwọ na-agbachaa, a na-akọwa mkpụrụ osisi na ala n'okpuru ha na ngwọta nke sọlfọ colloidal (1%) ma ọ bụ Karbofos (2%).
Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ndị dị otú ahụ n'oge kwesịrị ekwesị, ihe ize ndụ nke ọrịa na-ebelata. Na pests ndị siri ike. Ha nwere ike ịga na ndị currants site na nri ndị emetụtala ma ọ bụ site na saịtị dị nso. Ndị na-akọ ubi na-ata ahụhụ dị iche iche.
Ọ dị mkpa! Ọ bụrụ na nchịkọta currant bụ naanị na atụmatụ gị, ṅaa ntị na ụdị "ọlaedo" iche: "Isabella", "Ermak", "Laysan", "Shafak", "Uzbekistan", "Venus".
Ihe na-emekarị udide ududo na-emepụta onwe ya dị ka akwụkwọ ọcha ma ọ bụ aja aja nke na-akwụsị ịmalite na nkụ. Iji wepu ụdị pesti n'oge uto nke akụrụ ma ọ bụ ozugbo okooko, jiri Karbofos 50% (were 20-30 g maka lita 10). Osisi garlic-yabasị na-eme nke ọma ma na-arụ ya, nke na-enye ohere imebi ụbọchị.
Mite na-emepụta buds na epupụta, nke na-agba ọchịchịrị na nke nta nke nta na-amalite ịnwụ. Ọ nwere ike ịpụta n'oge ọ bụla, na ụzọ e si emeso ya dị iche. Dịka ọmụmaatụ, n'oge ejection nke brush na usoro bụ colfidal sulfur (10 lita - 75 g nke nkwusioru). Mgbe okooko osisi gasịrị, a na-ebelata ịta ahụhụ ya na 1%. N'otu oge ahụ, "Tedion" (0.4%) ma ọ bụ "Ester sulfonate" (0.5%) dị mma.
Ogbugbo a na-ejikarị n'ụgbụgbọ ahụ. Ha na-ekpochapụ ya site na ịkụnye osisi ahụ na paste nitrophenic n'ụdị ihe ngwọta 2% (250 g kwa 10 l). Ọ dị irè na mmiri, na-ehi ụra. Emechara jiri "Karbofos" 50% (20-30 g kwa ịwụ). The sawfly adịghị anabataghị Chlorofos ngwọta (0.2-0.3%).
Ị ma? 1 n'arọ nke tomato nwere ọ dịkarịa ala 700 puku osisi. Ibu arọ nke otu puku na-adabere n'ụdị dịgasị iche ma dị iche na 0.9 ruo 1.8 g.
Obosara ihe eji eme ihe nzuzo ga-anwụ ma ọ bụrụ na ị jiri "Aktar" 0,1% mgbe okooko ma ọ bụ tụgharịa mbadamba dị ka "Ọkụ" na mmiri. Ụzọ ndị mmadụ bụ mọstad na ntinye nke tansy, tomato n'elu na celandine.
A na-ebibi akụkụ nke midge na otu "Karbofos" (30 g / 10 l). N'otu olu a nwere ike iwere na 20 g nke "Trichlormetaphos". Nsogbu bụ na e nwere ọtụtụ n'ime nje ndị a - ha kwukwara Ome ka akwukwo larvae. Ị nwere ike ịmata ọdịiche dị na ha site na pink ma ọ bụ oroma agba. A na-ewepụ ha n'otu ụzọ, ma izu ole na ole mgbe ị na-ewere tomato, a chọrọ nhazi usoro ugboro ugboro.
Currant, gụnyere ọlaedo, nwere uru bara uru. Mkpụrụ ya nwere vitamin A karịa vitị ọ bụla ọzọ. Carotin dịkwa otutu - ọbụna karịa apricots. Ihe ndị dị ka pectin na anthocyanin dị mma maka imeri nsogbu. Enwere na tomato na tomato na ihe na-edozi ihe, nke bara uru maka ndi mmadu ndi nwere nsogbu ogwu.
Iji tụnyere acid dị na ya - ascorbic, citric, amber, malic na ọtụtụ ndị ọzọ na-eme ka currants bụrụ ihe atụ dị mma na ịṅụ mmanya.
Ọ dị mkpa! Otu n'ime "ndị agbata obi" kachasị mma na mpaghara maka currants ga-abụ eyịm (garlic nakwa repels pests). Banyere "latka" ndị bu ụzọ, ha nwere ike ịbụ ụdị akwụkwọ nri ọ bụla.
Achịcha nwere ike iwesa ngwa ngwa, ka jams na jams, yana ifriizi. Ha na-adabara dị ka ihe na-edozi na mmanya ma ọ bụ mmanya.
N'eziokwu, e nwere otu ihe na-echebara ndị na-akwado ụdị ịkụ na tii. Nke bụ eziokwu bụ na buds, akwụkwọ na okooko osisi (karịsịa ndị na-eto eto) nwere prussic acid, a gaghịkwa ewere ha maka ịgbado ọkụ, nakwa maka nsị.
Mgbe ị mụsịrị ihe niile banyere ịzụlite odo odo, ọtụtụ ga-achọ ịkụ osisi ole na ole na saịtị ahụ. Anyị nwere olileanya na ha ga-amasị ndị nwe ha. Nwee ezigbo owuwe ihe ubi!
Nkuku: anụ anụ nke ọkụkọ
Ihe bara uru ahihia ahihia
Ifuru nke mara mma - cyclamen. Ịkụzi ihe na ilekọta ụlọ, nakwa ndụmọdụ nye ndị na-elekọta ubi
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Kedu ka esi eto currants odo n'ogige